आमालाई खोजिरहेछन् अ’बोध आँखा, तर आमालाई कसैले ह’त्या गरिसके ! – Butwal Sandesh
आमालाई खोजिरहेछन् अ’बोध आँखा, तर आमालाई कसैले ह’त्या गरिसके !
धनगढी : आमालाई खोजिरहेछन् अ’बोध आँखा, तर आमालाई कसैले ह’त्या गरिसके ! मायो–मेट्रो अस्पतालको नवजात सघन उपचार कक्षको शड्ढया। छ महिनाकी ममताको मुहार पानी परेपछि उघ्रेको आकाजस्तै चहकिलो र शान्त छ। स्वास्थ्यकर्मी बोलेको आवाज सुनेपछि आधा बन्द भएका आँखीभौं भित्रबाट निर्दोष आँखा टिलपिल देखिए। यी अबोध शिशुका आँखाले दूध चुसाउने आमा खोजिरहेका होलान्। तर उनलाई के थाहा उनका आमा र बुबालाई कोही अपराधीले ह”त्या गरेर बालकमै बे’सहारा बनाएको कुरा। दिलबहादुर छत्यालले नागरिक दैनिकमा यो समाचार लेखेका छन् ।’
कुनै उपन्यासको कथाजस्तै लाग्ने यो हृदय–वि’दारक र कारुणिक कथा कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ कलुवापुरमा दम्पतीको वि’भ’त्स ‘ह”त्या भएपछि बेसहारा बनेकी ६ महिनाकी ममता भण्डारीको हो। टाउकोमा भित्री चो’ट लागेकाले चि’न्ताजनक अवस्थामा उनलाई अस्पताल पु-याइएको थियो। ‘सुरुमा बे’होस रहेकी शिशुको अवस्था चि’न्ताजनक थियो, अहिले अवस्था सुधार भएर सामान्य भइसकेको छ,’ उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी विन्दु ठकुल्लाले भनिन्, ‘स्वास्थ्य सुधार भएकाले मुहार उज्यालो भएको छ।’
चि’न्ताजनक अवस्थामा अस्पताल भर्ना भएकी यी बालिकाको स्वास्थ्य अढाई साताको उपचारपछि सुधार भएको हो। अ’पराधीले यी बालिकालाई पनि समातेर भुइँमा प’छारेकाले टा’उकोमा र’गत जमेको हुन सक्ने चिकित्सक मोहन साउदले बताए। ‘बाहिर कुनै चो’ट नदेखिए पनि टा’उकोभित्र लागेको चो’टले सुरुमा अवस्था ग’म्भीर थियो,’ उनले भने। बेसहारा बनेकी यी शिशुको उपचार गर्न पनि समस्या भएपछि माया–मेट्रो अस्पतालले नै सबै उपचार खर्च ब्यहोरेको अस्पतालका अध्यक्ष धीरेन्द्र साउदले बताए।
अस्पतालले डिचार्ज गरेपछि यी बालिकाको स्याहार–सुहार कसले गर्ने र भविष्य के हुने अन्योल छ। ‘अस्पतालमा उपचार गर्ने बेला त्यस्तै कसरी छोड्नु भनेर कुरुवाको रूपमा म आएकी हुँ। अस्पतालबाट लगेपछि यिनलाई कहाँ राख्ने भन्ने टुंगो छैन,’ अस्पतालमा कुरुवा रहेकी रम्बा बिष्टले भनिन्, ‘आमाको दूध खाने उमेरकी यो बालिकाको अवस्था देखेर रुन मन लाग्छ। यिनको जस्तो अवस्था कसैले भोग्नु नपरोस्।’
घ’टना यस्तो थियो
५२ वर्षीय जयलाल भण्डारी र उनकी पत्नी २२ वर्षीय धनादेवी भण्डारी ६ महिने शिशुसहित काठले बनेको टहराभित्र बस्थे। पहिली पत्नीको क्या , न्सरबाट नि’धन भएपछि जयलालले दुई वर्षअघि धनादेवीसँग बिहे गरेका थिए। पहिली पत्नीतर्फका दुई छोरा र एक छोरी थिए। दुई छोरामध्ये एक जना महेन्द्रनगर र अर्को पुख्र्यौली घर डडेल्धुरामा बस्थे। छोरीको बिहे भइसकेको थियो। छ महिने शिशुसहित दम्पतीमात्र त्यो टहरामा बस्थे।
फागुन १५ गते दिउँसो धनादेवीको बहिनी पार्वती रावल उनको घरमा गइन्। उनले भान्साकोठामा दिदी र अर्को कोठामा भिनाजुलाई ह”त्या गरिएको अवस्थामा देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेकी थिइन्। ‘म जाँदा घर सुनसान थियो, घरमा कोही नदेखेपछि फर्किन लागेकी थिएँ, शिशु रोइरहेको आवाज सुनेर भित्र गएर हेर्दा दिदी–भिनाजुलाई र’क्ता’म्मे देखें,’ उनले भनिन्। भिनाजु र छ महिने शिशु काठको टहराको एक कोठामा र धनादेवी काठकै टहरामा बनाइएको भान्साकोठामा र’क्ता’म्मे अवस्था फेला परेको उनले बताइन्।